မွန်ဂိုလီယန်း လည်ပင်းရစ်ပါ ရစ်ငှက် (Phasianus colchicus) အထီး
၃ သိပ္ပံနည်းကျ မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း
ဤဇယားသည် မျိုးစိတ်များတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား မျိုးရိုးဆက်နွယ်မှုယူဆချက်အရ အစဉ်လိုက်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Tragopan (ဇာမဏီပါးပြာ၊ ဇာမဏီပါးဝါ)
Lophophorus (မိုနဲ၊ အမောက်ရှည်မိုနဲ)
Pucrasia (koklass pheasant)
Bonasa (ruffed grouse)
Tetrastes (hazel grouse)
Dendragapus (blue grouse)
Tympanuchus (prairie-chickens and sharp-tailed grouse)
Falcipennis (Siberian grouse)
Canachites (spruce grouse)
Perdix (true partridges)
Phasianus (ရစ်လည်စိမ်း) ရစ်ငှက်အစစ်အမှန်
Catreus (cheer pheasant)
Crossoptilon (eared pheasants)
Lophura (မြန်မာငွေရောင်ရစ်၊ ရစ်ရင်မဲ) ရစ်ကြက်
↑ "A phylogenomic supermatrix of Galliformes (Landfowl) reveals biased branch lengths" (in en) (2021-05-01). Molecular Phylogenetics and Evolution 158: 107091. doi:10.1016/j.ympev.2021.107091. ISSN 1055-7903.
↑ Galliformes (in de-DE)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရစ်ငှက်&oldid=712706" မှ ရယူရန်
၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။